ओवेन हेमसाथका लेखहरू अन Martech Zone |
द्वारा लेखहरू ओवेन हेमसाथ
ओवेन हेमसाथ एक यूट्यूब विशेषज्ञ र क्यान्सर उत्तरजीवी हो। को राष्ट्रपति भिडिओस्पट, ओवेन एक साधारण बाट एक वैश्विक व्यापार बनाएको छ YouTube च्यानल। उहाँ यूट्यूब, फेसबुक भिडियो विज्ञापन, वेबसाइट डिजाइन, र भिडियो मार्केटिंग सम्बन्धित विषयहरूमा राम्रो सम्मानित विशेषज्ञ हुनुहुन्छ।
शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१7ओवेन हेमसाथ
भिडियो मार्केटिंग पूर्ण बलमा छ र मञ्च गर्नेहरू जसले प्लेटफर्मको लाभ उठाउँछन् इनामहरू काट्छन्। युट्यूब र गुगलमा स्तर निर्धारण देखि फेसबुक भिडियो विज्ञापनहरू मार्फत तपाईंको लक्षित संभावनाहरू खोज्न, भिडियो सामग्री कोकाको मार्शमेलो भन्दा छिटो समाचारफिडको शीर्षमा उक्लन्छ। त्यसोभए तपाईं कसरी यो लोकप्रिय तर जटिल माध्यमको लाभ उठाउनुहुन्छ? तपाइँको दर्शकलाई संलग्न गराईएको भिडियो सामग्री सिर्जना गर्ने पहिलो चरण के हो? भिडियोस्पटमा, हामी उत्पादन गर्दैछौं र